Yusuf Garaad oo Warbixin xanuun badan ka qoray dayaca Wasaarada Khaarijiga Somalia Saxaafadu Malahan Saaxiib Joogtaa Waagacusub Media 2013
Topnews:-Yusuf Garaad oo Warbixin xanuun badan ka qoray dayaca Wasaarada Khaarijiga Somalia 02 May 2013 Waagacusub.com-Suxufiga weyn ee Siyaasiga u xuubsiibtay Yusuf Garaad Omar ayaa Warbixin xanuun badan ka qoray dhibaatada shacabka Soomaaliyeed kala kulmaan duulimaadyada iskaga goosha Muqdisho iyo Nairobi. Inkastoo Yusuf Garaad ka gaabsaday inuu si gaara u bartilmaameedsado Wasaaradda Arrimaha dibadda Somalia hadana si guud ayuu dhaliil toosa u huwiyay Dowladda Federalka Somalia ,wuxuuna ku canaantay inay ka aamusan tahay sida xun ee dadka Soomaaliyeed ula dhaqanto Dowladda Kenya.
Qofkasta oo si degan u akhriya warbixinta tiiraanyada badan ee Yusuf Garaad ku qoray barta uu ku leeyahay Facebook wuxuu xaqiiqsanayaa in Wasaarad Khaarijiga Somalia ku fashilantay u hadlida dadkeeda dayacan.
Yusuf Garaad oo la rumeeysan yahay inuu Warbixintiisa qoray kadib markii uu dhoowr jeer ka mid noqday rakaabkii Muqdisho ,Wajeer iyo Nairobi sida foosha xun loogu rafaadiyay ,wuxuu Warbixintiisa ku bilaabay sidaan:-
Marka aad Nairobi ka duusho ee aad Muqdisho aaddo Safarkaagu Waa Hal saac iyo laabtaan daqiiqo. Waxaana lagu baarayaa laba jeer oo airporka Nairobi gudihiisa ah. Marka aad Muqdisho ka soo baxayso waxaa lagu baarayaa laba jeer garoonka Muqdisho ah. Dayaaraddii marka ay hawada Kenya soo gashana waxaa lagu leexeinayaa Wajeer, halkaas oo mar kale lagugu baarayo. Nairobi marka ay timaado inta meel la idin safo ayaa magacyada rakaabka oo liis ku qoran lagaa hubinayaa in aad ku jirto liiska, waxaana lagu weydiinayaa kaarkii aad dayaaradda ku soo fuushay. Ka dib waxaa lagu marsiinayaa baaritaan kale adiga iyo waxa aad sidato. Safarkani Wuxuu kugu qaadanayaa maalin barkeed ama ka badan oo saddax magaalo oo kala duwan lagu gacmeeyay wixii aad sidatay adigana suunka lagaa furay. Waxaan is weydiiyay mar haddii la isku soo baaray Muqdisho iyo Wajeer maxaa loogu baahday Nairobi in la isku baaro? Maxaase keenay in marka aad Nairobi tagto lagu weydiiyo boarding pass sidii in aad hadda dayaarad raaceyso. Dadka saaran Dayaarad kasta oo ka soo kacday magaalo Somalia ka tirsan oo soo galaya Nairobi ayaa sidan loola dhaqmaa. Arrinta waxay u baahan tahay in dib loo eego oo dowladda Soomaaliya ay dadkeeda u hadasho.